Georgia Yoita Sarudzo dzeMasineta Maviri
Ndira 05, 2021
Sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda mudare reSeneti yeAmerica nderipi iri kuitwa mudunhu reGeorgia.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, nemutevedzeri wavo, VaMike Pence, vakange vari muGeorgia neMuvhuro vachikurudzira vanhu kuti vavhotere nhengo mbiri dzebato ravo reRepublican Party dzinoda kumirira bato iri mudare reSeneti.
Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, nemutevedzeri wavo, Amai Kamala Harris, vakange vari kuGeorgia vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party dzinoda kumirira bato iri mudare reSeneti.
Pari zvino Republican Party ine maseneta makumi mashanu, Democtratic Party iine maseneta makumi mana nemasere.
Zvichakadaro, vakuru vemabhizimisi makuru muAmerica vanopfuura mazana maviri, vakanyorera paramende yeAmerica tsamba vachikurudzira kuti nemusi weChitatu ione kuti VaBiden havavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika.
Zuva iri ndiro rinotambirwa mavhoti akawanikwa naVaBiden mumatunhu eAmerica, rinove danho rekupedzisira kusvika pavanotora mhiko yekutungamira America musi wa 20 Ndira.
Vana muzvinabhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichiitwa nenzira kwayo kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezviito zvemunhu akakundwa musarudzo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Muzvinafundo Stan Mukasa, vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri, vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka mu America, vachiti hapana chichatadzisa VaBiden kugadzwa semutungamiri weAmerica mumasvondo maviri asara.